Arsene Wenger Oo Xaqiijiyay In David Ospina, Gibbs, Francis Coquelin Iyo Mohamed Elneny Ay Ku Bilaaban Doonaa Kulanka Burnley Ee FA Cup-ka, In Labo Saxiix Ay Sameyn Doonaa Iyo Inuu Isago Kooxda Sii Joogi Doono Waqti Kale - Wargane News
Home Sports Arsene Wenger Oo Xaqiijiyay In David Ospina, Gibbs, Francis Coquelin Iyo Mohamed...
Macalinka kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa qabtay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya kulanka ay kooxdiisa la leedahay Burnley ee wareega afaraad ee FA Cup ka oo ay Arsenal isku dayeeyso iney difaacato markeedii sadexaad oo xiriir ah.
Wenger ayaa xaqiijiyay goolhayaha Colombia ee David Ospina uu ku bilaaban doono shabaqa halka Kierin Gibbs, Mohamed Elneny iyo Francis Coquelin uu qishay in dhamaan ay ku soo wada bilaaban doonaan kulankaan.
Wenger ayaa yiri “David ayaa shabaqa ku bilaaban doona, waxaan u baahanahay inaan isbadla sameyno sidaasi darteed Francis (Coquelin) (Mohamed) Elneny iyo Gibbs aya iyagana ciyaari doona, Thomas (Rosiscky) isna qeyb ayuu ku lahaan doonaa kulankaan”.
Wenger ayaa la weydiyay xaalada Kerian Gibbs uu mustaqbalkiisa qarabka ingiriiska shaki ku jiro kadib markii uu waayay booskiisi koowaad ee Gunners wuxuuna yiri “Ma aha inuu ka walwalo Euro, waa hubaal fursad uu isku muujiyo ayuu heli doonaa, waan ogahay ciyaartooyda xiligaan oo kale waa ay fakaran laakin isaga wuxuu heli doona fursad uu qaranka isugu muujiyo”.
Arsene Wenger ayaa amaan ugu qubeeyay saxiixiisa cusub ee Mohamed Elneny wuxuuna yiri “Waa xidig khad dhexe ah oo gees-ka-gees ka ciyaara, wuxuu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro inta u dhexeysa labada xero ganaax, laakin xoogaa dhanka daafaca ayuu u badna yahay, wuxuu leeyahay aragti dheer, go’aan qaadasho degdeg ah, agaasimid iyo waliba awood hogaamineed”.
Sidoo kale Arsene ayaa xaqiijiyay iney ku dhaw yihiin saxiixa labada xidig ee mucjisada Nigeria lagu tilmaamo ee Kelechi Nwakali iyo Samuel Chukwueze wuxuuna yiri “Waan ku jirnaa howshoosa waan arkeena hadii aan dhameystiri karno dhawaa n”.
Ugu danbeyn mustaqbalkiisa ayuu ka yiri “Wali 18 nilood ayaa ka hartya qandaraaskeyga kooxda, waa waqti fiican wali, waxaa iga go’an inaan kooxdaan horumar la gaaro, waxaan gabi ahaanba diirada ku hayaa inaan shaqo fiican halkan ka qabto, wax waliba ayaa siin doonaa kooxdaan”.
Somalia: Dagaal culus oo xalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose